म चाहान्छु तिमी र म बीचको दुरी घटोस्, भावी श्रीमतीलाई पत्र !
Tansen Khabar - admin || २०७७ असोज २९ बिहिबार
हृदयविम्वित परावैजनी तिम्रा ती प्र्रस्तुतिहरुसँगै छचल्किरहेका कुण्ठासँगै, अदृश्य कल्पनाले तड्पीएर आज एउटा पत्र कोर्ने जमर्को गरिरहेको छु ।
जीवनको केही कालको अन्तरमा मेरो गाउँमा, मेरो घरमा, मेरो कोठामा अनि मेरो हृदयमा सजिएर आउने, छम् छम् चुरा बजाउँदै सिरमा सिन्दुर भरेर आउने मेरी प्यारी जीवनसँगिनी तिम्रै आगमनको कल्पनामा दिन रात बिताइरहेको छु ।
तिमी कस्ती छौ हौली ? तिमी काली, गोरी, नेप्टी, चेप्टी, अग्ली, होची, गोली, भुन्टी जस्ती भएपनि तिमीलाई मेरो मनमन्दिरमा स्वागत छ । तिमीलाई स्वागत गर्न प्रत्येक दिन मेरा बाहु अत्यन्त लालायित छन् । केवल तिमीलाई कल्पिँदै रातहरु बिताउन थालेको महिनौँ भयो ।
तिमीसँगको अपरिचितता मेरो लागि ठुलो उत्साह बनेको छ । तिमी जहाँ जे जस्तो अवस्थामा रहेतापनि तिमीलाई लिन म एकदिन पञ्चेबाजा बजाएरै आउने छु । भोलि तिमीसँगको जीवन सुखद होला अनि तिमीले मलाई कहिल्यै पनि खोट लगाउने ठाउँ नहोस् भनेर त बल्ल डुल्न राजनीति गर्न छाडेर जागिर गरिरहेको छु ।
भविष्यमा तिमीसँग विवाह गरेर दुख सुख बाँडेर जिन्दगी जिउने कल्पना गर्छु, विवाहका शतदिनपर्यन्त मधुमास मनाउने कुरा गर्दा पनि तिमीसँग छलफल गर्न नपाउनु यो कस्तो बिडम्बना ? अबको केही दिन केहि महिना अनि केही वर्षपश्चात् बनाउनुपर्ने जीवनसाथीको बारेमा अनभिज्ञ रहनुपर्ने कस्तो जीवन ? भन्छन् भाग्यले माथिबाट नै जन्मदाखेरी जोडी बनाएर पठाउँछ । माथिबाटै बनाएको जोडीसँग यतिका दिनसम्म चिनापर्ची नहुनु यो कस्तो भाग्य ? सायद तिमीले पनि त सोचिछ्यौ होला नि, मेरो हुनेवाला श्रीमान् कस्तो होला भनेर ? तिमीलाई मेरो हुनेवाला श्रीमान् भन्दै भेट्न देख्न मन लागेको भए कलंकीमा आउन त ।
भावी जीवनसाथी चिनौ,खोजौं भनेर एक, दुई, तीन, चार हुँदै पाँच जना सँग सम्म मैले प्रेम गरेँ तर त्यस एघारौँ अङ्कसम्म पनि तिमी समेटिन सकिनौँ । वसन्तले पात फेरेझैँ प्रेमिका फेरियो तर तिमीलाई पाउन सकिन । दिक्क लाग्न थाल्यो अब प्रेम नगर्ने विचार लिएको छु । तिम्रो कसम खाएर भन्छु कसैसँग प्रेम गर्दिन ।
मेरो कपाल फुल्यो । सबैले उमेर ढल्किन थाल्यो भन्छन् । तिम्रो कल्पनामा हराउँदा हराउँदै ठुलो समस्यामा परेँ । तिम्रो कल्पनाको विषयलाई उठाँदै चिकित्सक र मनोवैज्ञानिक कहाँ पनि देखाएँ कसैबाट उचित सल्लाह पाइन बरु बौलाहाको उपमा पाएँ ।
ए मेरी हुनेवाली जीवन सँगिनी,
म चाहान्छु तिमी र म बीचको दुरी घटोस् । कुरो चाँडै होस् तिम्रा घरका बाबा आमालाई पनि छोरी बढेको छनक देऊ न । के गर्नु मेरो घरमा त बाले कुरो नै बुझ्नुहुन्न । आफै ल्या’न झाँके भन्छन् तिमीलाई झाँके भन्दा बासित सारो रिस उठ्छ तर के गरम् थात उनकै, जात उनकै, भात उनकै त्यसैले केही भन्नै सक्दिन ।
मानिसले दुनियाँ सताउँछ । मैले पनि मान्छेलाई फोन नउठाएर सताउँछु । फोन नउठाएको तिम्रो कल्पनामा हराएर हो । सँगै पढ्नेहरुका त छोराछोरी पनि भैसके । आत्मा साक्षी राखी भन्न चाहान्छु कि प्रेम भनेको स्पर्श र यौन मात्र होइन आत्मीयता रहेछ । त्यै भएर मैले स्पर्श र यौनानुभुति गरेँ तर आत्मा भने अत्यन्त पवित्र छ । तिम्रो निम्ती म लड्न तयार छु । आशा छ तिमी पनि घडीको सुइसँगै मेरो प्रतिक्षामा छौ । तिमी पनि शरीरकी जे जस्ती भएपनि मनकी चाहीँ पक्कै चोखी छ्यौ होली तिम्रो चोखो मायाको चरम भोग गरौँला अवश्य पनि प्रतिक्षाको फल पक्कै मिठो हुनेछ ।
गुल्मीकी मालिका, बाग्लुङकी कालिका, म्याग्दीका गलेश्वर हुँदै काठमाडौँका त्रिपुरेश्वरसम्म भाकल गरेँ । तिमी आजसम्म सम्पर्कमा आइनौं । गाउँको आलीदेखि शहरको नालीसम्म गुल्मीको कालीपारदेखि ठमेलको बारसम्म, छल्दी खोलाको तिरदेखि धादिङको कृष्णभीरसम्म, पुर्कोट, धुर्कोट, इश्मा रजस्थल तम्घास, रिडी हुँदै पाल्पा तानसेनसम्म, सपनीको रातदेखि उच्च शिक्षाको साथसम्म, रौतहटको गौरदेखि वाल्मीकिको चौरसम्म कहीँ कतै हाम्रो भेट भएको हुनसक्छ ।
तिमी जस्ती भएपनि मेरो रोजाइका अन्य प्रेमिका भन्दा त के स्वर्गको हरेक सुख दिन नसके पनि अपूर्व माया दिनेछु । सुनैसुनले छाउन नसकेपनि गोरेटोमा फुलैफूल बिच्छाउन नसकेपनि काँडा बिझे निकालीदिनेछु ।
सबै जनाले जिस्काउँछन् बुढो भइस् भन्छन् । बा बिरामी भएर काठमाडौँ आएका छन् । घरमा बाले बिहे गरिनस् भनेर कराउँछन् । त्यसैले सबैको इख मार्ने गरी तिमी आऊ । तिमीलाई अचम्म लाग्ला यस्तो लेखेको तामाङले भनेर तर यो त बडिगाड पारीको शिव भाइले सिकायो अनि लेखेँ । तिम्रो प्रतिक्षामा मेरो काठमाडौको कोठा व्यग्र छ । अझ व्यग्र त मेरो अङ्गालो छ ।
तिमी आएपछि सुख दुख साटौँला । उज्यालो दिन भन्दा अँधेरी रात मज्जाले काटौँला । आऊ प्रियसी आऊ । छिटो आऊ । यसरी न तड्पाऊ ।